विवाहपछि श्रीमान उदिपसँगै आँचलको अन्तर्वार्ता : पल शाहसँग नाम जोडिएकोमा यसो भन्छिन् (भिडियोसहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/विवाहपछि श्रीमान उदिपसँगै आँचलको अन्तर्वार्ता : पल शाहसँग नाम जोडिएकोमा यसो भन्छिन् (भिडियोसहित)
विवाहपछि श्रीमान उदिपसँगै आँचलको अन्तर्वार्ता : पल शाहसँग नाम जोडिएकोमा यसो भन्छिन् (भिडियोसहित)
3,987 1 minute read
काठमाडौं, २० चैत्र । चर्चित नायिका आँचल शर्माले वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि दिएको अन्तर्वार्तामा आफूलाई अहिलेपनि मनपर्ने नायक पल शाह नै भएको बताएकी छिन् । बुधबार राति प्राइम टाईम्स टेलिजिभनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नायिका शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । तर, यसको मतलब आफू कहिल्यैपनि पल शाहसँग प्रेम सम्बन्धमा नरहेको जिकिर गरिन् । पल शाह आफूलाई मन पर्नुको मुख्य कारण भनेको नै राम्रो अभिनय गर्ने र अरुलाई सहयोग गर्ने मानवीय गुण भएको पनि आँचलले बताईन् ।
उनले आफूले उदिप श्रेष्ठसँग नै विवाह हुन्छ भनेर नसोचेको पनि सुनाईन् । आफ्नो नाम कसैसँग जोडिएको भएपनि प्रेम सम्बन्ध भने नरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,”उदिपसँग विवाह हुनुभन्दा पहिले मेरो नाम एकजनासँग जोडियो । पल शाहसँग मेरो नाम जोडिएर आएका समाचारहरु सही होईनन् ।”
नायकसँग तपाईको विवाह गर्ने तयारी थियो अरे नि ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको अर्को प्रश्नमा आँचलले भनिन्,”छ्या, कहाँ हुनु ? होईन । होईन् । म र उदिपजी रिलेशनसिपमा बसेको एक वर्षसम्ममा त यो कुराहरु आईरहन्थ्यो । दाल, भात तरकारी मुभि गर्दा म उहाँसँग डेट जान्थें । अर्कैसँग नाम जोडिएर आयो । पलजीसँग मेरो नाम जोडिनुमा संगै काम गरेको भएर होला ।”
भाई बचाई दिनु भन्दै दिदि रुदै मिडियामा, सक्दो शेयर गरि दिनुहोला (भिडियो हेर्नुस)
एउटा श्रीमती खोज्दै दुई श्रिमान मिडियामा ,बिदेश लग्दिन्छु भन्दै बिहे गरेर पैसा लगेर उतै बेपत्ता (भिडियो हेर्नुस्)